Wasiiru dawlaha cusub ee Madaxtooyada Qaranka oo xilka la wareegay +Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Wasiiru dawlaha cusub ee Madaxtooyada Qaranka oo xilka la wareegay +Sawirro.
Wasiiru dawlaha cusub ee Madaxtooyada Qaranka oo xilka la wareegay +Sawirro.
Wasiiru dawlaha cusub ee Madaxtooyada Qaranka Mudane Xasan Macallin Khaliif oo dhawaan Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay xilkaas ayaa kala wareegay xilka Wasiir dawlihii hore Mudane Cabduqaadir Sheekh Cali Baqdaadi, waxaana munaasabadda xil wareejinta goob-joog ka ahaa Ra’iisal wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed.
Mudane Xasan Macallin Khaliif Wasiir dawlaha cusub ee Madaxtooyada oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday Xafiiska Wasiir dawlaha ayaa si kooban uga hadlay qorshihiisa ku aaddan howlaha hortebinta leh ee Madaxtooyada Qaranka.
Dhankiisa, Wasiir dawlihii hore ee Madaxtooyada Mudane Cabduqaadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa ka warbixiyay shaqooyinkii muhiimka ahaa ee uu soo qabtay intii uu xilka hayey iyo kuwa horyaalla Wasiir dawlaha cusub. Waxa uuna ku booriyay sii amba-qaadidda howlaha culus ee harsan.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa bogaadiyay shaqooyinka uu soo qabtay Wasiir dawlihii hore, waxa uuna kula dardaarmay Wasiir dawlaha cusub dardargelinta howlaha dhiman.
Munasaabadda xil wareejinta waxaa ka qeyb galay wasiirka arrimaha Diinta iyo Awqaafta Mudane Cumar Cali Rooble, Wasiir Ku xigeenka Amniga Gudaha Mudane Caadil Sheegow Sagaar, Wasiir kuxigeenka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Marwo Xiis Xasan Aadan.
Previous articleWariye ka tirsan warbaahinta Qaranka oo ku guuleystay abaalmarinta sanadlaha ah ee Muqdisho.
Next articleWasiirka cusub ee Cadaaladda XFS oo soo dhaweyn loo sameeyey+sawirro.